DAAWO:- Somaliland oo soo bandhigtay Muuqaalka Askartii kagoosatay Boocame ee iska dhiibtay Laascaanood. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- Somaliland oo soo bandhigtay Muuqaalka Askartii kagoosatay Boocame ee iska dhiibtay Laascaanood.
Maamulka Soomaaliland saraakiil ka tirsan iyo maamulka degmada Laas-caanood ayaa soo dhaweeyay, iyagoona soo bandhigay ciidamo ay sheegeen in ay kasoo goosteen maamulka Puntland oo ay xurguf kala dhexeyso.
Soomaaliland ciidamadaan ay soo bandhigeen ayaa tiradoodu gaaraysaa 30 Askari iyo taliyaha hoggaaminaya ayaa waxaa ay ahaayeen Ciidamada Puntland ee ka howlgeli jirey deegaanka Boocame ee Gobolka Sool.
Previous articleDhacdo Xanuun badan:- Cabdisalaan waxa ay Murmeen Xaskiisa kadibna waa ay dishay
Next articleDAAWO VIDEO:Siyaasinti Ugu Badna Somaliland Kulmiye oo Muqdisho Xisbi Midnimo Soomaliya Uga Dhawaaqay
Taajka Maakhir January 19, 2020 At 8:11 pm
Beelaha lagu tilmaamo Hartiga Woqooyi saddex masiibo oo ku habsatay baa loo adeegsanayaa dagaal maskaxeed iyaga si joogto ah loogu bahdilo, kuwaas oo ah:
1. Hoggaanka sida ba’an uuga curyaamay
2. Jahliga baahsan ee ku geedaamaan
3. Baahiyaha iyo duruufaha adag ee ku baahay
Isaaqa waxaa heerkan ku soo simay kuwoodii ay dawladdii kacaanku fursadihii dahabiga ahaa ku galladday oo markii ay aqoon, khibrado iyo hanti ba ka dheefeen dib ugu caasiyay oo deeto u xuub siibtay qawsaarada iyo qawleysatada ay ku soo baxeen.
Khibradahoodii bay u adeegsadeen in mashruuca ay SNM u la baxeen dunida kaga hambagaan waxii mucaawino ahaa ee maatida woqooyiga ay Beesha Caalamku ku deeqaysay. Fursadahaas ay qawsaaradani dawladdaasi kacaanka beelaha kale ee geyiga ka wadaaga aad ayay uga qatanaayeen in kasta oo ay qawleysatadani si xun ugu abaal daroodeen oo ay weliba xaajada dib ugu gurriciyeen Hartiga Woqooyi iyaga oo magaca Daarood ku xumeynaya.
Taajka Maakhir January 19, 2020 At 8:14 pm
Xaqiiqadu waxay in aanay beelaha kale ee geyigan, gaar ahaan Hartigu, marna ba dareenkooda galin ay Isaaqa naceyb qabiil ku colaadiyaan waayo damiirkoodu ma siinin karin Soomaali ehel ah ayaa dhiig sokeeye kala galaysa qabtii horteed iyo dabadeed ba. Way se dhacday oo weli dhacaysaa oo waxaa na xadkaas muqaddaska ahaa gooyay Isaaq iyo Habar Gidir.
Sababta se ay ku dhacday in 30 sanadood ka dib Hartiga Woqooyi weli sidan loo bahdilayo oo duruufaha adag aawadooda in mar ba iidoorku caanteyn ku rartaan ay dantu ku khasabtay, iyaga oo weliba Puntland wax ka dhistay, ayaa yaab iyo amankaag aadmiga oo idil ku noqday xaqiiqdii.
Aadmigu dhammaantii marxaladaha adag ee soo mara iyo ciddii mar dhagartay ba waxay ku dadaalaan in ay ko xoroobaan. Tabar iyo taag ba waxay hayaan bay iskaga saaraan muddo kasta oo ay ku qaadato. Maxaa Hartiga Woqooyi weli Isaaqa cagtooda hoos dhigay? Waa su’aasha aan weli jawaab loo haynin.
Taajka Maakhir January 19, 2020 At 8:19 pm
*Kaa raalli ahaada qaladaadka badan ee qoraalka naga ciideeyay, aalad wareersan baan wax ku qorayaa ee.
axmed January 19, 2020 At 9:04 pm
Kuwaan maxay Puntland ciiidan uga dhigataa, ee ay kalsoonida ugu qabtaa ? allaha ceebeeyee wey na ceebeeyaan mooryaanta cidaasi.
Taajka Maakhir January 20, 2020 At 12:40 am
Jaalle in aad sidaas u la af gaadho waxaa kuu dhaantay adiga oo toos u darsa waxa ku kallifay in mar ba shilimaad yar lagu dibindaabiyo. Eedda iyo iinta meeshan ka jira waxaa 50% xambaarsan maamulka iyo madaxda Puntland hoggaanka u haysa.
Marka xaqa laga hadlo axmedoow ceebta taagani waxay ku wada dhammuuqan tahay dadka Hartiga ku abtirsada dhammaantood waayo iyada oo ay Puntland 20 jirsatay ayuu sha’nigii toleed ee lagu wada yagleeshay weli suuxsan yahay.
Cilmi baaris heer jaamaceed ah ayay u baahan taha in la sal gaaro waxa Hartiga sidaas ka yeelay oo shimbirkoodii ka dilay. In la is eedsado oo la isu gaffo dan iyo doow midna u ma aha reerkan ay cambaartu ku wada taallo.
ciise January 20, 2020 At 9:29 pm
ciidamadu a sadex-mushaharlayaashii baa mise waa laba mushaharlayaal?